लकडाउनमा सानोकान्छाको दैनिकी : न राहत, न हात ! – Mero UK
लकडाउनमा सानोकान्छाको दैनिकी : न राहत, न हात !
३० चैत, काठमाडौं । महाराजगञ्जका बाटाहरु सुनसान छन् । सडक छेउका सबै सटरहरु बन्द । खाली सडकमा प्रहरी, आर्मी र सेतो प्लेटका गाडी बेगवान देखिन्छन् । आकाश खुलेको छ, सायद सडक जामविनाको तीनहप्ते धुलोरहित मौसमले हुन सक्छ । बाटो टन्टलापुर घामको प्रकाशले ज्वाजल्यमान छ ।
यो उज्यालो मौसममा अँध्यारो मुख लगाएर कान्ति बाल अस्पतालपछिको ओरालो झर्दैछन् एक वृद्ध । दाह्री हेर्दा साधुजस्तो लाग्छ । फुलेको दाह्री पनि अनुहारसँगै अँध्यारिएको छ । काँधमा उस्तै फोहोरले मैलिएर अँध्यारो भएको खाली बोरा छ । अँध्यारै रङको कपडा लगाएका उनी मन्द बेगमा लखर–लखर हिँडिरहेछन् ।
न उनलाई लकडाउनको डर छ । न दुनियाँको मतलव । प्लास्टिकको खाली बोतल देख्यो कि ट्याप्प टिप्छन् अनि आफूले बोकेको बोरामा फाल्छन् । अक्सर पानीका खाली बोतल ।
शायद खाली सडकमा खाली बोतल पनि कमै भेटिन्छन् । ६५ वर्षीय सानोकान्छा महर्जनले यतिबेलासम्म पानी पिउन पाएका छैनन् । काकाकुल छन् । हामीले उनलाई भेट्दा अपराह्नको ३ बजेको छ ।
आज लकडाउनको १९ औँ दिन हो । कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड १९ ले संसारका मानिसहरुलाई हायल–कायल पारेको छ । करिब–करिब विश्व नै ठप्प छ । १९ दिनदेखि नै काठमाडौंका गल्ली र मुख्य सडकहरु सुनसान बनेका छन् । अत्यावश्यक काम बाहेक नागरिकलाई आफ्नै देशका बाटोमा हिँड्न अनुमति छैन । देशभरका मानिसको दैनिकीमा परिवर्तन आएको छ । विश्वकै मानिसहरुले कल्पनै नगरेको जीवनशैली अपनाइरहेका छन् ।